Résultats de recherche » lesona malagasy terminale » lay andriamialy
Accueil Résultats de recherche : lesona malagasy terminale
Résultats de recherche pour : lesona malagasy terminale
Tamin’izahay nianatra malagasy famaranana, ny tenako moa imbetsaka terminale ary ny mampianatra anay samy mahay be daholo, dia nianatra momba ny « tody ». Tsy misy tadidiko ny lesona tamin’izany an! ny hanihany fotsiny dia ‘lay hoe « ny atody tsy misy fa ny akoho no miverina ». Fa iza tokoa moa no voalohany? ny akoho sa ny atody? Ny zavatra tadidiko dia ny …